Inokuvadza Ndeipi Mutsvuku SEO? Semalt Expert Concerned
Tinoziva kuti ma webmaster akasiyana-siyana anoshandisa nzira dzekutsvaga dzeshuwa ye SEO yekuvandudza nzvimbo dzavo dzekutsvaga mu injini dzekutsvaga . Vanoshandisa nzira dzakawanda kuti vasvike kumusoro kwezvinjini dzekutsvaga uye vakaipa.
Pano Igor Gamanenko, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , achakupa mazano ekuti ungaziva sei chikwata chetsva SEO kuti uwane nzvimbo yakanaka yewebsite yako paIndaneti.
Blackhat SEO inzira isiri yemutemo yekuita injini yekutsvaga. Mhando dzakawanda dzinoshandiswa dzinovakwa, uye zvinyorwa zvekunyorera zvakagadzirwa zvisinei nemitemo nemirau yeGoogle. Iwe webhusaiti yako icharambidzwa nemitsheni yekutsvaga kana iwe uri kubatanidzwa mumhando dzemafu dze SEO - graph online tool. Iwe unogona kupiwa chirango uye unotarisana nematambudziko akawanda ekuparadzanisa internet. Zvinyorwa pamamwe mawebsite zvakanyorwa zvisina kuchengetedza unhu. Mitsara yavo ine mavara mazhinji epelling and grammar, uye mazwi echishandiswa anoshandiswa pano neapo. Munguva iyi, dzimwe nyanzvi dzeSEO dzakagamuchira chikwata chine nhema SEO kunyengedza vatengi vavo, zvakadai se syndiq8.com, uye blachhatseo.com. Kana uri kushandisa zvishandiso zveimwe yekambani idzi, iwe haugoni kuwana mhinduro dzaunoda.
Ichokwadi kuti vese vashandisi veIndaneti vakawana email spamming..Tinogamuchira maimeri nemashoko anokanganisa uye zvinyorwa. Kudzivisa maeamayiri aya kunokosha. Kunyanya, iwe haufaniri kuvhara zvinyorwa zvacho. Keyword spamming, search engine spam, uye nenyaya spam ndiyo nzira nhatu dzinokosha dzehomwe yehomwe SEO.
Zvose SEO hazvisi zvakaipa
Injini dzinotsvaga dzinocherechedza kana iwe waita chichena chikwata SEO kana chifukidzo chetsvuku SEO. Inyo ye webhusaiti yako inoenderana nemashandisirwo awakashandisa kusvika ikozvino. Zvakakosha kugadzirisa kusava nesimba uye kubvisa mutsotsi wekunyama SEO kana uchida kuvandudza bhizinesi rako paInternet. Blackhat SEO inogona kusimbisa nzvimbo yako yepaiti, asi haikwanise kukubatsira iwe kwenguva yakareba sezvo injini yekutsvaga dzicharambidza uye inoronga nzvimbo yako mukati memazuva.
Hasiyo injini dzinotsvaga dzinosiyanisa mawebsite akanaka uye mawebsite akaipa. Imhizha yauri kushanda nayo izere vane ruzivo web site designers , vatengesi, uye vanhu vanogara mune zvevanhu. Iwe unogona kuda kushamwaridzana nevanhu vanoita zvinhu zvepamutemo. Nayo yose, SEO haisi yakaipa sezvainove nerutivi rwenyama uye chikamu chakajeka. Nzira yerima ndeye paunoshandisa chikwata chetsvuku SEO, uye ruvara rutsvuku nderokuti iwe unosarudza mbatya chena se SEO.
Kune avo vanobatanidzwa mumagetsi emhando dzemauto SEO, tinokurudzira kuti vanofanira kuzvidzivirira kusvika pamwero mukuru. Izvi ndezvokuti basa ravo richava risina zvibereko. Mawebsite avo haagoni kuwana zvakanaka injini yekutsvaga, uye havagoni kuita mhando ipi zvayo.
Maitiro asina kunaka
Nyanzvi dzemajena eSeO dzakabatanidzwa mune zvisiri izvo uye zvisiri pamutemo. Asi iwe unofanirwa kuyeuka kuti mawebsite akavharirwa uye akarambidzwa nemitsva yekutsvaga haisi mahava madema. Dzimwe nguva mabhizinesi anokundikana kunzwisisa kuti ndeapi nzira dzekutsvaga nzvimbo dzavo.